Obodo iri kacha dị mkpa na France: ọnụọgụgụ na nketa | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | Obodo, Francia
Ikwu okwu banyere obodo iri kachasị mkpa na France pụtara ikwu maka ndị nwere ọnụ ọgụgụ kachasị n'ọnụ ọgụgụ. Ma nke ndị nwere akụkọ ihe mere eme na uru bara uru na ọbụna ndị na-anabata ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọbịa.
N'ihi na ọ bụghị naanị na obodo ukwu dị mkpa ma ọ bụ n'ike akụ na ụba ya. Enwere obodo ndị, n'agbanyeghị na ha pere mpe, nwere nnukwu mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke ala Gallic oge ochie yana nke nwere ihe ịtụnanya ụkpụrụ ụlọ nke na-adọta ọtụtụ puku ndị njem kwa afọ. Mana, n’ebughi ọzọ, anyị ga-egosi gị obodo iri kachasị mkpa na France.
1 Obodo iri kachasị dị mkpa na France na akụkọ ntolite na ọnụ ọgụgụ mmadụ
1.1 Paris, otu n'ime ọla nke Europe
1.2 Marseille, ike akụ na ụba
1.3 Lyon, nke atọ n'ime obodo iri kachasị mkpa na France
1.4 Toulouse, isi obodo Occitania
1.5 Nke dị mma, mgbukepụ nke Côte d'Azur
1.6 Nantes, obodo nke Jules Verne
1.7 Strasbourg, isi obodo Europe
1.8 Montpellier, bụ obodo nke okpueze Aragon
1.9 Bordeaux, ala nke mmanya
1.10 Lille, «Obodo nke Art na History»
Obodo iri kachasị dị mkpa na France na akụkọ ntolite na ọnụ ọgụgụ mmadụ
Njegharị anyị nke iri na-adọrọ mmasị obodo na France ga-amalite, olee otú ọ ga-abụ na uzọ ọzọ, na-enweghị atụ Paris, na ihunanya «City of Love». Mgbe e mesịrị, ọ ga-aga n'ihu na mpaghara mpaghara ndị ọzọ dịka ọnụọgụgụ Marseille o Mma, isi obodo Côte d'Azur.
Paris, otu n'ime ọla nke Europe
Ele nke paris
Anyị ga-achọ, ọ bụghị otu, mana ọtụtụ isiokwu ga-agwa gị gbasara ihe niile ị nwere ike ịchọta na Paris, yabụ aga m ahapụ gị ebe a ozi banyere obodo. Mana, dị ka ị maara, nnukwu akara ya bụ eiffel Tower, nke emere maka Universal Exposition nke 1889 ma di n'ime ubi mara mma nke Mars ubi.
Ọ naghị ahapụ ihe dị mkpa Katidral Notre Dame ma ọ bụ Nuestra Señora, ihe ịtụnanya Gothic rụrụ na narị afọ nke XNUMX. Na, na-esote ma ncheta, ihe magburu onwe ya Vlọ ihe nkiri Louvre ma ọ bụ nnukwu ụlọ nke Adabaghị, ebe Napoleon Bonaparte liri.
Ga-ahụ nleta na Paris bụkwa agbata obi bohemian Montmartre, Chọọchị nke Obi Dị Nsọ, Royal Basilica nke Saint-Denis na Champs-Elysées. Ihe a niile n’echefughi ije ije n’akụkụ osimiri Seine ma nwee ọ Frenchụ nri French na ụlọ nri na ụlọ ahịa mara mma.
Marseille, ike akụ na ụba
Ọ dị n'ụsọ Oké Osimiri Mediterenian ma bụrụ nke ndị Finishia ghọrọ n'ọdụ ụgbọ mmiri azụmahịa, ọ bụghị naanị obodo nke abụọ kachasị biri na France, kamakwa nke nyere aha ya na abụ mgbanwe nke isiokwu ya bụ. Ihe ndị Marshal, ukwe mba ugbu a nke mba ahụ.
Na isi obodo nke Bouches nke Rhône ị nwere ike ịga leta ndị mara mma katidral nke Santa María la Mayor, pụrụ iche na France niile maka ụdị Romanesque-Byzantine ya. Na, n’akụkụ ya, akwụsịkwala ịhụ Saint Victor Abbey, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX na nke nwere ike ịbụ ebe Ndị Kraịst kacha fee ofufe na mba Gallic.
Ma njirimara kachasị na Marseille bụ anwuru. Ndị a bụ ụlọ mara mma mara mma nke jere ozi dị ka ụlọ nke abụọ maka bourgeoisie nke obodo ahụ. N'etiti ha, Château de la Buzine pụtara ìhè maka ịma mma ya, mana taa, a ka nwere ihe dị ka narị abụọ na iri ise gbasasịa na mpaghara Marseille.
N'ikpeazụ, n'ime agwaetiti If bụ ebe ewusiri ike nke narị afọ nke XNUMX a ma ama maka ịbụ ụlọ mkpọrọ ebe Ọnụ nke Monte Cristo, omume a ma ama nke Alexander Dumas.
Lyon, nke atọ n'ime obodo iri kachasị mkpa na France
Lyon: Katidral St. John
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nde ndị bi na ya, Lyon, bụbu isi obodo nke Gaul, bụ obodo atọ kachasị mkpa na France. Ọ bụ ama maka imepụta silks, mana karịa ihe niile maka nnukwu ihe mgbagwoju anya. N'ezie, ọtụtụ n'ime ya ka edepụtara dị ka Ihe Nketa Uwa.
Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa Old Lyon, aha e nyere ya ochie na renaissance obi. N'ime ya ka ị ga-ahụ katidral st john, na nnukwu windo ihu ya nke nwere Romanesque na Gothic. Ma ụka nke San Jorge, Pink Tower, ụlọ nke Stock Exchange na Bullioud nkwari akụ ma ọ bụ ihe pụrụ iche Plaza de la Trinidad.
Agbanyeghị, ikekwe ihe kachasị ama na Lyon bụ Ndaghari, nke bụ ụzọ a gafere n’ime ogige dị n’etiti ụlọ ndị ahụ. Obodo a nwere ihe dịka narị ise, ọkachasị na obodo ochie ya. N'ikpeazụ, n'elu Fourvière ugwu ị ga-ahụ ihe nkiri ndị Rom na odeon, yana nnukwu Notre-Dame de Fourvière basilica.
Toulouse, isi obodo Occitania
Lolọ Nzukọ Toulouse
Mara maka "Obodo Pink" Ebe ọ bụ na agba a na-adịkarị na ụlọ ụlọ brik ya mere, Toulouse nwekwara ọtụtụ ihe ị ga-enye gị.
N'etiti ya okpukpe ncheta, anyị nwere ike ikwu na ị gara na Katidral Saint Étienne, ya na usoro gothic nke di na ndida ya, na ihe di egwu basilica nke San Sernín, nke bu otu n’ime ndi uka Romanesque kacha ibu na Europe. Ma kwa ebe obibi ndị nọn nke ndị Jacobins na basilica nke Dorada nke Toulouse, nke bu ihe anakpo Black Virgin.
Banyere ụlọ ndị nkịtị, ọtụtụ ha ụlọ gothic dị ka nke Boysson, Bernuy, Serta ma ọ bụ Olmières. Ma dokwara ha Renaissance na-ekpuchi. Ọmụmaatụ, ndị nke Hotel Molinier, Assézat ma ọ bụ Mahadum.
Mgbe e mesịrị bụ nnukwu ụlọ nke Capitol, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX na nke bụ ugbu a oche nke City Council; ochie Delọ ọgwụ de la Grave, ya na ọmarịcha dome na kanaal du midi, ọrụ pụrụ iche nke injinịa nke bụ Ebe Ihe Nketa Worldwa.
Nke dị mma, mgbukepụ nke Côte d'Azur
Nice: obí eze ndi bekee
Mara mma Nice bụ n'etiti n'elu iri obodo na France n'ihi ọtụtụ ihe. Na mbu, site na ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya, ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ ruru narị puku atọ na iri ise. Ma, karịa ihe niile, n'ihi ịbụ ndị njem nleta ebe nke Usọ mmiri ma nwee kilomita asatọ nke oke osimiri dị egwu. N'ime ha, anyị ga-ekwupụta nke Opera, nke Le Sporting ma ọ bụ nke Castel.
Anyi na-ekwukwa ya maka ihe ncheta dika Monte Alban nkera na obí ndị isi nke Savoy, Prefecture ma ọ bụ Senate, na-echefughị ​​ndị na-ewu ewu ije nke bekee. Ha ga-atụkwasịkwara anyị nkwanye, ụlọ ndị e wuru n'oge Belle epoque. Ọmụmaatụ, nnukwu ụlọ del Inglés, Valrose, Santa Helena na Gairaut ma ọ bụ Hotel Excelsior.
Nantes, obodo nke Jules Verne
Nantes: Castlọ ndi isi nke Brittany
Anyị na-aga ugbu a ọdịda anyanwụ France iji hụ obodo onye edemede ahụ Jules Verne. Obodo a Breton nwekwara ọtụtụ ihe ncheta. Ndị dị egwu ochie nnukwu ụlọ nke Dukes of Brittany na Katidral nke Saint Peter na Saint Paul, njikọ nke ụdị ụkpụrụ ụlọ dị iche iche.
Na, na-esote ha, ndị dị oké ọnụ ahịa basilica nke senti nicholas, Neo-Gothic ma edepụta ya dị ka ihe ncheta akụkọ ihe mere eme nke France; ọnụ ụzọ Gallo-Roman nke San Pedro; Halllọ Nzukọ Obodo na Exchangelọ Ahịa ma ọ bụ ụlọ ihe nkiri Graslin. Ha niile n’echefughi, kpomkwem, Leslọ ihe ngosi nka Jules VerneNleta dị mkpa maka ndị na-agụ akwụkwọ edemede na ndị hụrụ akwụkwọ n'anya.
Strasbourg, isi obodo Europe
Strasbourg: Obere France
Ewere isi obodo Europe na Brussels na Luxembourg, obodo Alsatian a nke gbachiri ókè ala German nwere a akụkọ ihe mere eme center kwupụtara a World Heritage Site.
Nke a na-anọdụ na oku na-aga Nnukwu agwaetiti nke Strasbourg, ebe ị ga-aga eleta egwuregwu ndị pụrụ iche Katidral Notre Dame, Gothic n'ụdị ma were ụlọ okpukpe nke anọ kachasị elu n'ụwa. I kwesịkwara ịhụ ụka nke Santo Tomás, San Pedro el Viejo na San Esteban.
Tinyere ihe ncheta ndị a, ị ga - ahụ na Strasbourg ndị ọzọ dịka Obere obodo France, ya na n'okporo ámá na ochie ụlọ, na Rohan obí eze ma ọ bụ ụlọ Kammerzell ma ọ bụ Customs. N'ikpeazụ, echefula ịgafe ihe Ogige Kleber, na mpaghara azụmahịa, na ịhụ Ebe Ngosi Ihe Ngosi nke Ọma, tinyere ihe osise ya ndị dị mkpa.
Montpellier, bụ obodo nke okpueze Aragon
Ọ bụ obodo na-eto eto ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ n'ime ndị gara aga, ebe ọ bụ na e guzobere ya na XNUMXth narị afọ. Otú ọ dị, ọ naghị akọ n’ebe ndị na-adọrọ mmasị nke kwesịrị nleta gị.
Nke mbu bu Katidral San Pedro, ya na ihe ndozi ya puru iche nke ogidi abua adighi-eguzo onwe ha na ulo-ya. Na, na mgbakwunye, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị hụ ọwa mmiri nke San Clemente, nke e wuru na narị afọ nke XNUMX, ọnụ ụzọ Peyrou, n'ụdị Doric, na ọmarịcha ụlọ nke Ngalaba Nkà Mmụta Ahụike ebe ndị edemede dịka Nostradamus, Rabelais na Ramón Llul mụrụ.
Maka akụkụ ya, nke Jardin des Plantes Ọ bụ ogige osisi botanical kacha ochie na France, ebe ọ bụ na emepụtara ya na 1523 na Towerlọ Elu nke Pines bidoro na narị afọ nke iri na abụọ wee zaghachi ụdị Norman Gothic.
Bordeaux, ala nke mmanya
Ebe a na-akpọ Bordeaux Stock Exchange
Isi obodo New Aquitaine, akpọrọ Bordeaux "Ọmarịcha n'ehi ụra" n'ihi na ọ dịrị ndụ ogologo oge na-enweghị ịkwalite ihe ncheta ya. Otú ọ dị, afọ ole na ole ugbu a, ọ kpọtere ndị njem. N'ezie, mpaghara obodo a maara dị ka Port nke Ọnwa E kwuwo na ọ bụ Ebe Ihe Nketa Worldwa.
En "Pearl nke Aquitaine", dị ka ọ na-mara, ị ga-eleta ndị Katidral St. Andrew, nke emere na narị afọ nke XNUMX, ọnụ ụzọ ámá ochie ya dịka nke Cailhau na nke ọmarịcha basilica nke Saint-Michel, na usoro Gothic na-agba agba na nke nwere mgbịrịgba mgbịrịgba dị elu nke karịrị otu narị mita.
Ma ị ga-ahụ basilica nke San Severino, nnukwu abbey nke Santa Cruz, ọmarịcha Thelọ ihe nkiri na Lescure agbata obi, ihe nile eji eme ihe na omenaala deco. Ihe a niile n’echefughi ihe Ogwe ahịa ahịa, otu nnukwu ụkpụrụ ụlọ nke kpochapụwo ụlọ.
Lille, «Obodo nke Art na History»
Iji mechaa njem anyị nke obodo iri kachasị mkpa na France, anyị ga-akwụsị na Lille, nke akpọrọ "Obodo nka na akụkọ ihe mere eme" ebe ọ bụ Isi Obodo Omenala Europe na 2004.
Dị nnọọ nso na ókèala Belgium, na Lille ya dị ukwuu nnukwu ụlọ nke Vauban, ugbu a ghọrọ n'ime ogige. Ikwesiri ile anya nke oma Katidral Notre Dame de la Treille, ụdị neo-gothic ma wuo na narị afọ nke iri na itoolu. Dị ka ọ dị nso Chọọchị Maurice, nwere ụdị nke Ncheta Ihe Mere Eme nke France.
Ma, ọmarịcha ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume bụ Obí nke Ezi Arts, nke e wuru site n'usoro nke Napoleon na nke nwere nnukwu eserese na eserese. Anyị nwere ike ịgwa gị otu ihe ahụ banyere ụlọ nke opera. Mana nnukwu akara nke Lille bụ Charles de Gaulle, nke nwere ụlọ ihe ngosi nka etinyere na ebe omumu ya.
Na mmechi, anyị egosila gị obodo iri kachasị mkpa na France. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị ọzọ anọgidewo na-arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị njem nleta Cannes, nke anyi rara nye ya post na blọọgụ anyị, mgbe ochie Carcassonne, akụkọ ihe mere eme Avignon ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ mmadụ Aix en Provence. Chọghi ima ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Obodo iri kachasị mkpa na France
Isi obodo Eshia